श्रीमान् अमेरिका उड्ने तयारीमा , ‘म पागल जस्तै कसरी बस्नु त्यसैले पानीमा डुबुल्की लगाउँदै छु भन्दै पत्र लेखेर श्रीमती बेपत्ता ! – ईमेची डटकम
श्रीमान् अमेरिका उड्ने तयारीमा , ‘म पागल जस्तै कसरी बस्नु त्यसैले पानीमा डुबुल्की लगाउँदै छु भन्दै पत्र लेखेर श्रीमती बेपत्ता !
काठमान्डौ , ३४ वर्षकी दुर्गा शर्माले चार पृष्ठ लामो आफ्ना वेदनाको कथा तितो सत्य शिर्षकमा लेखेर शुक्रबार बिहानदेखि सबैबाट सम्पर्क बिहीन भएकी छिन्। चार पृष्ठ लामो पत्रमा आफू र छोरा श्रीमान् कपिल र सासु तथा परिवारका सदस्यबाट पीडित भएको उल्लेख गरेकी छन्। यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित देशभरका प्रहरी दुर्गाको खोजीमा जुटेका छन्।बिहीबार साँझ दुर्गा र कपिल बिचमा छोराको पढाईको बिषयलाई लिएर सामान्य झगडा भएको थियो। त्यो रात कपिल छोरासँग सुते। दुर्गा अर्को कोठामा सुतिन्।
‘म कलेज जान बिहान उठदा ढोका बाहिरबाट बन्द थियो,’ कपिल शर्माले भने ‘दुर्गा हामी दुबैलाई छोडेर कहाँ गईन् थाह छैन।’यतिबेला महानगरीय प्रहरी कार्यालय मातहत रहेका तीनवटै परिसरले दुर्गाको खोजी गरिरहेका छन्। यस्तै प्रहरी सञ्चार मार्फत दुर्गाको हुलिया ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ।महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा दुर्गाका बुवा कुलप्रसाद पौड्यालले आइतबार ज्वाईं कपिल शर्मा न्यौपानेलाई विपक्षी बनाउँदै छोरी खोजीदिन निवेदन दिएका छन्। उनले दिएको निवेदनमा आफ्नी ३४ वर्षीया छोरी हराएको र ज्वाईं तथा उनको परिवारमाथि शंका रहेको उल्लेख गरेका छन्।
गौशाला वृत्तका डिएसपी प्रदिपकुमार सिंह दुर्गा जानसक्ने सम्बन्धित सबै स्थानमा प्रहरीले खोजी जारी राखेको बताउँछन्। उनले परिवारका सदस्य र छरछिमेकीसँग सोधपुछ समेत भएको बताए।‘हामी लगातार उहाँको खोजीमा लागेका छौं,’ डिएसपी सिंहले भने ‘कल डिटेल समेत निकालेर अनुसन्धान भइरहेको छ।’ वृत्तका अनुसार प्रहरीले दुर्गाले पत्रमा भनेजस्तै उनले कतै आत्महत्या गरिन् कि भनेर खोलानाला र जंगलमा समेत उनको खोजी भइरहेको छ। प्रहरीले परिवारका सदस्यलाई सँगै लिएर चोभार, थानकोट र सुन्दरीजलमा समेत दुर्गाको खोजी गरिरहेको छ।
प्रहरीका अनुसार दुर्गाले आफुसँग रहेको मोबाईल घरमै छाडेकी छन्। उनी सामान्य लुगामा छाता बोकेर घरबाट निस्किएकी छन्। उनले साथमा पैसा समेत नबोकेको परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई बताएका छन्।उनले पत्रमा श्रीमान् कपिलले छोरालाई कुटपीट गर्ने र आफूलाई समेत गाली गलौज गर्ने गरेको उल्लेख छ।‘कलेजका स्टाफहरुलाई श्रीमती हो भनेर चिनाउन नहुने अनि छोरा जन्मेपछि त कसैले थाह पाउला जस्तो लुकाउनुपर्ने कसैले थाह पाउला कि चिन्ला भन्ने डर’ दुर्गाले पत्रमा लेखेकी छन् ‘म भोलीका दिन पागल जस्तै कसरी बस्नु त्यसैले पानीमा डुबुल्की लगाउँदै छु।’
पारिवारिक स्राेतका अनुसार कपिल शर्मालाई अमेरिकाकाे डिभी परेकाे थियाे। केही दिन अघिमात्र तिनैजनाले भिसा लिएका छन्। उनीहरू एक महिनापछि अमेरिका उड्ने तयारीमा थिए। परिवारका सदस्यका अनुसार कपिल अमेरिका जान आतुर थिए। तर दुर्गा अमेरिका जान इच्छुक थिइनन्।दुर्गाका नजिकका नातेदार चिकित्सक कृष्ण आचार्य दुर्गा हराउनु केही दिन अघि पनि आफ्नी दिदीलाई फोन गरेर दुखेसो पोखेको बताउँछन्। उनले विवाह पछि दुर्गाले श्रीमान्को परिवारबाट मानसिक यातना पाउने गरेको उनले लेखेको विवरणले खुलस्त बनाएको बताए।